नमोबुद्ध नगरपालिकाले आफ्नो सातौँ स्थापना दिवस मनायो – Radio Roshi
in रोशी खबर / समाचार / स्थानीय तह — by Roshikhabar —	December 1, 2020
यश कुमार परियार–मंसिर १६,
काभ्रे जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाले सातौँ वर्ष पुरा गरी आठौँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । सातौँ नगर स्थापना दिवसको अवसरमा आज नगरपालिकामा कार्यक्रम आयोजना गरी भव्य रुपमा मनाईएको हो । पुर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा नगर प्रमुख टि.पि. शर्मा तिमल्सिनाको सभापतित्व रहेको थियो । कार्यक्रममा नगरपालिकाकी उपप्रमुख राम देवि तामाङले स्वागत मन्तव्य राखेकि थिईन् ।
सातौँ नगर स्थापनाको अवसर पारेर नमोबुद्ध नगरपालिकाले आजबाट भु–सेवा केन्द्र पनि संचालनमा ल्याएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पुर्व मन्त्री बाँस्कोटाले उक्त सेवाको सुभआरम्भ गरेका हुन् । मालपोत कार्यलय काभ्रेका प्रमुख लोक बहादुर भण्डारीले भु–सेवा केन्द्रको प्रमाणपत्र नगरपालिकालाई हस्ताण्तरण गरेका थिए ।
साथै सोहि अवसरमा भकुण्डे हुँदै नगरपालिका देखि दारेगौडा जाने नव निर्मित बाटोको पनि प्रमुख अतिथि बाँस्कोटाले उद्घाटन गरेका थिए । उक्त सडक शहरी विकास तथा भवन डिभिजन तथा भवन निर्माण विभागका उपनिर्देशक कुमार मैनालीले नगरपालिकालाई हस्ताण्तरण गरेका थिए । नगरपालिकामा यस वर्ष कालोपत्रे भएको २ कि.मि. सडक रु ८ करोड ४० लाख लागतमा निर्माण भएको उनले जानकारी दिए । सोह समारोहमा नगरपालिकाको झण्डा पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
देश संघिय संरचनामा गईसकेपछि नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको ३ वर्षे कार्यकाल पुरा भएको अवसरमा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको ३ वर्ष नामक किताव पनि प्रकाशित गरेको छ । कितावमा नगर भित्रको ११ वडाका जनप्रतिनिधिहरुले ३ वर्ष भित्र गरेका विकाश निर्माणका कामहरु साथै नगरको परिचयलाई समाबेस गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पुर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, सभाध्यक्ष नगर प्रमुख टि.पि. शर्मा तिमल्सिना, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उद्धव के.सि., प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव राम पोख्रेल, पुर्व राज्य मन्त्री रेसम लामा, संविधान सभा सदस्य रामहरी सुवेदी, प्रतिनिधि सभा सांसद गंगा बहादुर दोङ, प्रदेश सभा सदस्य गोमा भुर्तेल, रत्न ढकाल, चन्द्र लामा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।